July | 2007 | Layma's World
Posted on July 25, 2007 by layma
Today is the past of tomorrow….
Tomorrow is the result of today…..
Try your best for tomorrow….Try to leave your beautiful past..
Today is in my hands…..I can handle it…..
Tomorrow is not in my hands…..I’m not sure that whether I have tomorrow or not…..
Filed under: Wondering |	Leaveacomment »
မဂျစ်ရဲ့ လျှောက်ခြစ်ထဲမှာ “အချစ်ဆိုတာ.. အတောင်ပံနဲ့ငှက်လား…” လို့ မေးထားလို့ရေးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ကဗျာတပုဒ်ကို ခပ်လန့် လန့်နဲ့ ပဲတင်လိုက်ပါတယ်….
မနှင်သော်လဲ ပြန်လို့ သွားတယ်…..။
သိပါရဲ့လား သိခဲ့လား…..။ ။
Posted on July 24, 2007 by layma
မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာများအသင်းမှ Green Architecture နှင့် Architecture as I understand it ခေါင်းစဉ်များဖြင့် Seminar ကို မြန်မာအင်ဖိုတက် တွင် ဇူလိုင် ၂၈ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း……။ ။ (၂၀ရက်နေ့မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှ)
Who broke your heart ?
Many say that “Love” is unspoken language between two hearts…It’s also true that “Love” isakind of uncured disease….
“Love” makes you happy when you are loving to and being loved by someone…..But, it transforms toadangerous disease when you are left by someone….
What will you do if your boyfriend/ girlfriend left you alone ??? Will you cry ??? Will you be so sad ??? If so , you’ll becomealoser….
Don’t hurt yourself !!! Don’t waste your time !!! Try to smile !!! Smile for life !!! Stand for life !!!
Here are some of my advice for broken hearted men and women…..
If someone left you alone….
1. Go immediately to the beauty saloon for shampooing and hair-cut…While shampooing , listen lovely songs and you can recall your sweet memorial time….But don’t cry anymore…..
2. Change your hair style…..Hair can make very noticeable change for your face and soul….You’ll be active when you feel your new style in the mirror….
3. Go shopping but save your money…haha
4. Do your hobby….
5. Write down your love story or working experience…..or…..
6. Don’t seek for another partner immediately…..and don’t drink too much to cure your heart….
7. Try to calm down your heart and soul…..
8. Try very hard in your work to show your success after being left….
9. Let see him or her that you can stand/live without him/her….
10. Proof that your are notaloser….
All right. Don’t break your heart by yourself ….Don’t hurt yourself….
Filed under: Link to the past |	5 Comments »
Posted on July 20, 2007 by layma
“ ……ကလေးလေး သိပ်ချစ်တယ်….ကို ဒါလေးဘဲ ပြောတတ်တယ်နော……ဘယ်အချိန်ဘယ်လို စကာ ကိုယ်ချစ်သွားမှန်းမသိပေမယ့် ……….”
ဒီသီချင်းစာသားလေးကို “လေးမ” သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ…. ထူးအိမ်သင်ရဲ့ “စကားလုံးတွေ သိပ်မလိုဘူး…” ထဲကလေ….။ အခုတော့ ဖြိုးကြီး ပြန်ဆိုထားတယ်……။
“ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်တုန်းက စချစ်သွားခဲ့သလဲလို့အတိအကျ မသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကို ကျွန်တော်တော့ အံ့သြတယ် ” စာမျက်နှာ ၁၉၉ (ချစ်သူလား…စကားတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့တယ် – ဂျူး)
ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကတော့ စကားပွင့်တွေကြားမှာ နစ်မျောနေခဲ့လို့ဒီစာကြောင်းလေးကို အမှုမဲ့ ၊ အမှတ်မဲ့ ပဲ…….။ တနေ့ က “ အချစ်ဆိုတာ ကြိုးနဲ့ သီဖို့ မလိုတဲ့ ပန်းကလေးများ ”ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးမှာ ဒီလို အတွေးလေး ပြန်တွေ့ ရတော့မှ ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ အမြင်လေးကို သတိထားမိသွားတယ်…..။
“ ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ဘယ်အချိန်က စချစ်သွားမှန်းမသိဘူး ဆိုတဲ့လူတွေ တော်တော်ညံ့တာပဲဟု ကျွန်မထင်ပါသည်။ သည်လောက်အရေ့းကြီးသည့် အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို သူတို့ ဘာကြောင့် သတိမထားမိကြတာလဲ။” စာမျက်နှာ ၂ (အချစ်ဆိုတာ ကြိုးနဲ့ သီဖို့ မလိုတဲ့ ပန်းကလေးများ-ဂျူး)
ဒီလိုဆိုတော့လဲ “ဂျူး ”ပြောတာဟုတ်သားပဲ…….။ ဘ၀မှာ သမရိုးကျ မဟုတ်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား တစုံတရာ ဖြစ်ပျက်သွားတာကို တကယ်မသိလိုက်ကြဘူးလား……။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ရတာလား……..။ မသေချာလိုက်တာလား……။ စာရေးဆရာတွေ…..သီချင်းရေးဆရာတွေက သူတို့ ရဲ့ အတွေးတွေ ၊ အယူအဆတွေ ခံစားချက်တွေကို ကလောင်တံ ( Typing ) နဲ့အသက်သွင်းလိုက်တဲ့ အခါ “လေးမ” တို့စာဖတ်သူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးစရာတွေ ၊ တွေးစရာတွေ ၊ သုံးသပ်စရာတွေ ရလာတတ်ပါတယ်…….။ အချစ်တစ်ခုတည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး……။ အရာရာတိုင်းမှာ တခုခုပြောင်းလဲသွားတိုင်း သတိထားခဲ့မိပါရဲ့လား…….။
“သိခြင်း ၊ မသိခြင်း
ထိုင်ရင်း ၊ ငိုင်ရင်း
(ငါ) သိဖို့ရှက်ခဲ့သလား
ရှိဖို့ခက်ခဲ့သလား…။
(ငါ) တွေးဆဲ မေးဆဲ
တိုးတိုးလေး “မှတ်” …တဲ့
“You have No Extra Time”….။ ။
Filed under: Poem, Thinkings from novels, Wondering |	5 Comments »